Lacagta Turkiga ee Lira ayaa hoos u dhacday marna abid halkii ugu hoosaysay marka loo eego doolarka Maraykanka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Turkiga » Lacagta Turkiga ee Lira ayaa hoos u dhacday marna abid halkii ugu hoosaysay marka loo eego doolarka Maraykanka
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Investments • News • Dadka • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Turkiga
Lacagta Turkiga ee Lira ayaa hoos u dhacday marna abid halkii ugu hoosaysay marka loo eego doolarka Maraykanka.
Gabagabadii, go’aammada ku saabsan siyaasadda lacagta ee Turkiga ma aha kuwa uu qaato bangiga dhexe laftiisa ee waxaa lagu qaataa Qasriga Madaxtooyada.
Lacagta Lira ee Turkiga ayaa sanadkaan hoos u dhacday boqolkiiba 20 waxaana kala bar qiimo dhaca uu yimid ilaa horaantii bishii hore.
Waxqabadkii ugu xumaa ee suuqyada soo ifbaxa sanadkan, lacagta Turkiga ayaa taabatay heer hoose oo ah 9.3350 marka loo eego doolarka maanta.
Societe Generale ayaa saadaalisay in 100-dhibcood la jari doono oo ay ku xigto hakad bangi dhexe maadaama liradu ay hoos ugu dhaceyso 9.8 marka loo eego dollarka dhammaadka sannadka.
Bandhigii ugu xumaa ee suuqyada soo ifbaxa sanadkan, Lira-ga Turkiga ayaa hoos ugu dhacday qiimihii ugu hooseeyay abid marka loo eego doolarka Mareykanka.
Lacagta Turkiga ayaa taabatay halkii ugu hooseysay oo ahayd 9.3350 marka loo eego doolarka ka hor inta aysan soo bixin waxoogaa khasaare ah. Waxay istaagtay 9.31 markay ahayd 18:22 GMT.
Falanqeeyayaasha maaliyaddu waxay u arkaan wax yar dib u dhigista lacagta qaranka ee dhibka badan ee Turkiga, marka la eego waxa loogu yeero filashooyinka dulsaarka dulsaarka “aan caqliga lahayn” ee dabayaaqada toddobaadkan.
Lacagta Lira ee Turkiga ayaa sanadkaan hoos u dhacday boqolkiiba 20 waxaana kala bar qiimo dhaca uu yimid tan iyo horraantii bishii hore, markaasoo Bangiga Dhexe ee Turkiga waxay bilaabeen inay siiyaan calaamado xashiish inkastoo sicir -bararku kor u kacay ilaa boqolkiiba 20.
Turkiga Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa muddo dheer ku baaqayay in la fududeeyo lacagta oo saamayntiisa, oo ay ka mid tahay in si degdeg ah loo beddelo hoggaanka sare ee baanka dhexe, ayaa loo arkaa inay wiiqday kalsoonidii siyaasadda sannadihii u dambeeyay.
Ka dib markii bishii la soo dhaafay naxdinta heerka 100-dhibcood ay dirtay lira, dhaqaalayahannada ay wareysatay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku kala qeybsamay in bangiga dhexe uu fududeyn doono 50 ama 100 dhibcood oo kale oo saldhig u ah kulanka siyaasadda Khamiista.
Qaar ka mid ah dhaqaalayahannada ayaa diiday inay ka jawaabaan ra'yiururinta marka la eego sida aan la saadaalin karin bangiga dhexe, gaar ahaan ka dib markii Erdogan uu ceyriyay saddex ka mid ah guddiga siyaasadda lacagta (MPC) toddobaadkii hore, oo ay ku jiraan laba loo arkay inay ka soo horjeedaan dhimista sicirka.
“Ugu dambayntii go’aammada ku saabsan… siyaasadda lacagta ma aha mid uu qaato bangiga dhexe laftiisa laakiin waxaa lagu qaadaa Qasriga Madaxweynaha,” ayay yiraahdeen falanqeeyayaasha Commerzbank.
Ka dib markii uu ruxay bangigii dhexe ee ugu dambeeyay, Erdogan "Wuxuu si wax ku ool ah meesha uga saaray dhammaan diidmadii aragtidiisa aan caadiga ahayn ee ah in dulsaarka badan uu keeno sicir barar sare", falanqeeyayaasha SocGen ayaa ku qoray qoraal macmiil.
In kasta oo ay jirto “caqli -darrada” dhimista sicir -dhimista oo hadda sii socota, “hadda ma jirto meel lagu tilmaamo dood -dhaqameedyada dhaqameed marka la tixgelinayo habka [bangiga dhexe] ay u badan tahay,” ayay qoreen.